Inona no atao hoe Coronavirus ary Ahoana no ampitana izany? | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYInona no atao hoe Coronavirus ary Ahoana no ampitana izany?
inona ny coronavirus
Coronavirus (Coronavirus) no nahita voalohany tao aminà olona 29 miasa amina tsena mivarotra hazan-dranomasina sy biby velona any Wuhan, Sina, ny 2019 desambra 4, olona maro nitsidika an-tsena io andro io ihany no notanterahina tany amin'ny hopitaly miaraka amin'ireto fitoriana fitarainana ireto. Vokatry ny fizahana ireo santionany nalaina tany amin'ireo marary dia nambara fa ny tsimokaretina nahatonga ilay aretina dia fantatra fa avy amin'ny fianakaviana virus SARS sy MERS. Tamin'ny 7 Janoary, nanambara ny anaran'io valanaretina vaovao io ny "New Coronavirus 2019 (2019-nCoV)". Avy eo dia nomena anarana hoe Kovid-19 (Covid-19) ilay viriosy.
INONA NY CORONAVIRUS?
Coronaviruses dia fianakaviana lehibe misy viriosy izay mety maharary ny olombelona ary mety ho hita amin'ny karazana biby sasany (saka, rameva, ramanavy). Ny Coronaviruses nivezivezy teo anelanelan'ny biby dia mety miova rehefa mandeha ny fotoana ary mahazo tratran'ny aretina ny olombelona, ​​ka manomboka mahita zava-mitranga olombelona. Na izany aza, ireo otrik'aretina ireo dia miteraka fandrahonana ho an'ny olona rehefa nahazo ny fahafahany mifindra amin'ny olona tsirairay. Kovid-19 dia virus iray nipoitra tao an-tanàna Wuhan mpitsidika, ary nahazo ny fahitana mifindra avy ao amin'ny olona tsirairay.
KOA INONA NO ANAN'i CORONAVIRUS?
Ny coronavirus vaovao, toy ny coronaviruses hafa, dia heverina fa alefa any amin'ny feon'ny taovam-pisefoana. Tetefo miafina misy setroka, mihetsiketsika, mihetsiketsika, mihomehy, ary viriosy miparitaka amin'ny tontolo iainana mandritra ny kabary, mifandraika amin'ny otrikaretina moka ny olona salama ary mahatonga azy harary. Fifandraisana akaiky (akaiky ny 1 metatra) dia takiana hahazoana mamindra ilay aretina amin'ny olona araka ity fomba ity. Na dia ny tsikaritra toy ny fivoaran'ny aretina ao amin'ny olona izay tsy mbola teo amin'ny tsenan'ny biby ary narary vokatry ny fifandraisana amin'ny marary, dia tsy mbola fantatra ny habetsaky ny areti-mifindra amin'ny 2019-nCoV. Ny zava-dehibe indrindra izay mamaritra hoe ahoana ny fivoaran'ny valan'aretina dia ny fomba mora hamindran'ny otrik'aretina olona olona sy ny fomba mahomby amin'ny fepetra ilaina. Raha ny vaovao farany, dia azo lazaina fa tsy voaloto amin'ny sakafo (hena, ronono, atody, sns) ny 2019-nCoV.
Ny Tuberkule dia alefa any Metrobüste?
Inona no atao hoe Vatman?
Inona no atao hoe mpiasa madinika? Salary, Job Opportunities and Code of Occupation
Androany amin'ny tantara: 11 Martsa 1930